Rehefa mandany faran'ny herinandro isika dia te hankafy ny fotoana malalaka ary hanokana andro iray amin'ny fialam-boly tianao indrindra. Rehefa tsy te ho voakorontana amin'ny antso an-tariby isika dia mila mpiambina fambara finday hiadiana amin'ny antso manelingelina. Indraindray, tsy te hiresaka amin'olona izahay, fa ny olona manelingelina dia hiantso hatrany ...
Ny mpangalatra finday dia mikendry indrindra ny toerana maro izay fady ny fampiasana finday, toy ny efitrano fanadinana, sekoly, tobin-tsolika, fiangonana, fitsarana, famakiam-boky, foibe fihaonambe, teatra, hopitaly, governemanta, vola, fonja, filaminam-bahoaka sy ny toby miaramila. Rahoviana...
Ny fitsipiky ny Jammer finday
Ny jammer finday dia mikendry indrindra ny karazan-toerana rehetra mandrarana ny fampiasana telefaona finday, toy ny efitrano fanadinana isan-karazany, sekoly, tobin-dasantsy, fiangonana, fitsarana, famakiam-boky, foibe fihaonambe, teatra, hopitaly, governemanta, vola, fonja , filaminam-bahoaka ary miaramila ...
Maninona no malaza be ny mpangalatra GPS
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-23
Amin'izao fotoana izao, ny mpangalatra famantarana GPS dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Mihabetsaka ny isan'ny toerana ampiasaina, maninona no malaza be ny mpandika GPS? Ny lazan'ny jammers GPS dia misy ifandraisany amin'ny fampielezana ny zana-tsipelina GPS, satria ny fitaovana fanaraha-maso GPS dia ampiasaina betsaka amin'ny tra ...